Nzira Dzakanakisisa Dzinobva Semalt For Filters MuGoogle Analytics
Zvinotsvina zveGoogle Analytics zvinogona kugadzirisa, kuchinja uye kugadzirisa data inowanikwa mune maonero ekuonekwa. Zvinogara zvichikurudzirwa kuti iwe ugadzire zvakanakisisa zvinoshandiswa zvinoshandiswa kuti uone kuti unhu hupi huri pa internet.
Oliver King, Mutengi Wekugutsikana Kwevateresi Semalt , anonyanya kutaura pamusoro pezvinhu zvikuru zvaunofanira kuchengeta mupfungwa yekubudirira: kusabatanidzwa mumugwagwa wepamberi, kutarisa mabheji, kuziva nzvimbo yako yepamushambadziro, uye zviitiko zvakasiyana.
Futa kunze Mutemo Wemugwagwa
Vanhu vazhinji havateereri rudzi rwemigwagwa mawebsite avo anogamuchira uye haatombofungi nezvakabva uye nekusiyana kwemaonero avo - мешок помидоров. Kana iwe uchida kushandira bhizinesi rako kwehupenyu hwose, zvakakosha kuronga marwara ako uye unovimbisa unhu hwahwo. Iwe unogona kuwona izvo vatengi vako vanoita pawebsite yako, uye kana ichokwadi, saka unofanira kufuta kunze kwemugwagwa wepamusoro kusvika pamwero mukuru. Chinhu Chisingabatanidzi Mukati Mufambiro Wemagetsi unogona kubvisa data inotangira kuhofisi yako kana kumba kwako. Kazhinji, vanhu vanozvibvisa ndokubvisa uye havazviverengi kumaonero avo ose maonero pazuva. Nzira chete yekubvisa kukanganisa kwemukati ndeyokuumba mafaira uye kudzivirira ma IP aderesi. Iyo nguva dzose inobatsira pakubvisa data kubva kuGoogle Analytics account uye inogona kupa mhinduro dzakanaka.
Masangano akasiyana-siyana anoda kuona izvo vashandi vavo vari kuita mumaawa ehofisi uye kuti maitiro avo sei pawebsite dzavo uye mabloggi. Nokuda kweizvi, vanoita mukati mawo mafungiro ekuona chete uye havatauri zvose zviri mukati..Iko IP address-based filter iyo ingakupa mhinduro yakarurama. Somuenzaniso, vashandi vave vachishanda kubva kumisha yavo uye vaida kugamuchira michero yakanaka kubva pawebsite yavo vanogona kuisa kana kusabvisa dheti zvichienderana nezvavanoda.
Google Analytics inotarisa maziso maviri akasiyana neaya anowanzozivikanwa se trailing slashes filter. Kushandisa iyi firiji, unogona kuwana nyore mhinduro dzemibvunzo yako. Tinokukurudzira iwe kuti uite trailing slashes ne filters zvichienderana nezvinodiwa.
Google Analytics inogona kukubatsira kuti ubvise mararamiro akaderera. Pasina zvinyorwa zvinyorwa, vashandisi veGoogle Analytics vanoda kuwana ruzivo pamusoro pehuwandu hwemaji eji peji vanozokwanisa kuwana muzvinyorwa zvavo. Izvozvo zvinogona kuvatungamira kubvisa zvigadziri zvinopedza nguva uye kuvimbisa kunaka kwewebsite yavo. Zvinokurudzirwa kuti unoshandisa zvinyorwa zviduku kuti uchinje rose deta yako, yakakumbirwa URL, mhando dzemushandirapamwe uye zviitiko.
Vatengesi vemagetsi vanowanzoshandisa zvigadzirwa zvevhidhiyo. Google Analytics yakaronga zvidzidzo kubva kumagariro evanhu akadai se Twitter, LinkedIn, Google+ uye Facebook. Inofunga nezvayo sechimiro chakaenzana nekutumira, uye kana uchida kuzvitsvaga, zvinonzi iwe unyore mutemo weReferral kuti uve nehuwandu hwekuwanda kwekuona nzvimbo yako yakagamuchirwa kubva kumajw.org. Hazvingave zvisina kururama kutaura kuti masangano akasiyana-siyana anoshanda pamwe neshupfumi yehupfumi kuwedzera mabhizinesi avo. Nokugadzira mafungiro akadaro uye kuisa zvinyorwa zvako, iwe unogona kuita kuti nzvimbo yako ionekwe mu tsvakurudzo yekutsvaga mhinduro uye kuvimbisa kuvimbika kwayo kune zvakawanda.